“Xasan Sheekhoow maanta wixii ka bilawdo waxaa la mid tahay musharaxiinta, waa inaad ka degtaa kursiga..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Xasan Sheekhoow maanta wixii ka bilawdo waxaa la mid tahay musharaxiinta, waa inaad ka degtaa kursiga..”
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud inuu kasoo baxo madaxtooyada Soomaaliya maadaama uu waqtigiisa dhamaaday.
C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh sharci ahaan maanta ay ugu eg tahay xilliga rasmiga ah ee uu sii haynayo jagada madaxtinimada dalka, islamarkaana wixii maanta ka dambeeya loo baahan yahay inuu la mid noqdo musharaxiinta dalka ku sugan.
“Xasan Sheekhoow, maanta wixii ka bilawdo waxaa la mid tahay musharaxiinta, waa inaad ka degtaa kursiga, kana soo baxdaa Villa Soomaaliya, islamarkaana aad wareejisaa baabuurka aan xabadaha karin, anagaba ma heysano, meesha aan joogno meel ka xun lagu geyn maayo, meeshaas unbaad tageysaa, mana jirto sharci aad kusii joogi karto” Sidaas waxaa yiri C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maanta oo kale muddo 4-sano laga joogo loo doortay xilkaasi, waxaana maanta ku eg-waqtigiisa sharciga ah, waxaana ay xilligaasi aheyd markii ugu horeysay uu si rasmi ah uga soo dhex muuqday siyaasadda dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, musharaxiinta haatan isaga la tartameeysa ayaa haatan soo jeediyay in xilka madaxweynaha si KMG loogu dhaariyo guddoomiyaha Baarlamaanka ee waqtigiisa dhamaaday Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, sidoo kale waxaa ay ku baaqeen in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo isna musharax ah inuu xilka ku wareejiyo ra’iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte.
Ugu dambeyntii, xubnaha musharaxiinta iyo xisbiyada siyaasadda dalkaa ayaa sheegay inay dacwad ka gudbin doonaan madaxweyne Xasan Sheekh, hadii uusan xilka wareejin, iyadoo madasha wadatashiga qaran ay bishii hore go’aamiyeen in madaxda dowladda ee waqtigoodu dhamaaday ay xilka sii heynayaa ilaa bisha Octobe 30-keeda.